Android ဖုန်းမဖွင့်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ Androidsis
Android ဖုန်းအသုံးပြုသူအများစု၏အကြီးမားဆုံးစိုးရိမ်မှုတစ်ခုမှာဖုန်းမဖွင့်ခြင်းဖြစ်သည် မည်သည့်ရှင်းပြချက်မရှိဘဲအချို့သောအချက်မှာ။ ၎င်းသည်ရံဖန်ရံခါဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားပြင်ဆင်မှုများနှင့်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်ကောင်းသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရင်းအမြစ်ကိုပင်ရှာနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဤပြproblemနာအတွက်အဖြေကိုရှာနိုင်သည်။
ထိုအခါငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူထားခဲ့ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်းမဖွင့်ပါကကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ဤအရာသည်ရိုးရှင်းသောအကြံဥာဏ်များဖြစ်သည်၊ သို့သော်ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်အလွန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုစစ်ဆေးပါက၎င်းတွင်ပြaနာရှိမရှိကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အရေးမကြီးသောအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်း၏ဘက်ထရီကုန်သွားပြီလားစစ်ဆေးပါ။ ၎င်းသည်ဘက်ထရီအားနည်းပြီးရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးကျွန်ုပ်တို့အသုံးမပြုသောအချိန်တွင်အားကုန်သွားသည်။ သို့မဟုတ်ဘက်ထရီနှင့်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လုံးဝအားကုန်သွားစေသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တုံ့ပြန်မှုရှိမရှိသိရန်သင့်ဖုန်းကိုအားသွင်းကိရိယာနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။
အချို့ကိစ္စများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သတိရရန်အရေးကြီးသည် ဖုန်းကိုဖွင့်သည်အထိမိနစ်အနည်းငယ်ချိတ်ဆက်ပါ။ ဒီတော့ဒီဖုန်းမှာ Android ဖုန်းကနေတုံ့ပြန်မှုရှိ၊ မရှိသိချင်ရင်မိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ပါ။ အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ပြproblemနာကတခြားနေရာပါ။ အန္တရာယ်များကိုကာကွယ်ရန် ကျနော်တို့အမြဲတမ်း၎င်း၏ status ကိုအပေါ်ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်.
ထို့အပြင်ဘက်ထရီနှင့်လည်းဆက်စပ်မှုမှာ၎င်းတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာရှိနေသည်။ ဘက်ထရီယိုယွင်းနေခြင်း (သို့) ဘက်ထရီယိုစိမ့်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအရာသည်ဖုန်းထဲမှကျွန်ုပ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရမည့်အရာဖြစ်သည်၊ သို့သော်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်ပြtheနာများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်ကတည်းက။ သင့်ဖုန်းပေါ်ရှိအဖုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်လျှင်၎င်းကိုပြုလုပ်ပါ၊ အဖုံး၏အခြေအနေကိုစစ်ဆေးရန်၊ ယိုစိမ့်မှုရှိ၊ ထိုသို့ဆိုပါကဘာမှမထိပါနှင့်၊ သို့သော်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့သည်ပြproblemနာ၏အရင်းအမြစ်ကိုတွေ့ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဖုန်းဘက်ထရီကိုပြန်ပြင်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်မီနှင့်နောက်တစ်ကြိမ်မဖွင့်ပါကသင်၏ Android ဖုန်းစိုစွတ်နေလျှင်၊ ပြtheနာ၏မူလအစကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။ ဆိုတဲ့အချက်ကို ရေထဲသို့၎င်းကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အလုပ်ကိုရပ်တန့်စေသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ရေထဲရှိရေရှိမရှိ၊ အဖုံးဖွင့်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းသည်ကောင်း၏။ စိုလာရင် ကျွန်ုပ်တို့အချိန်မရွေးဆောင်ရွက်ရမည့်လမ်းညွှန်ချက်များစွာရှိပါသည်.
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ငါတို့အမြဲတမ်းထမင်းနဲ့လောင်းနိုင်တယ် ကျနော်တို့ရေထဲသို့ထဲသို့ယိုစိမ့်ပြီမြင်နိုင်ပါပြီလျှင်။ ဒါဟာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ် ငါတို့အရင်ပြောခဲ့ပြီးပြီ။ ဖုန်းပေါ်တွင်ရေကိုတိုက်ဖျက်ရန်ထိရောက်သောစနစ်။
နောက်ထပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်တစ်ခုမှာ၎င်းသည်အမြဲတမ်းမဖွင့်မီသင်၏ Android စမတ်ဖုန်းတွင်ပြaနာတစ်ခုရှိလျှင်ဖြစ်သည်။ ဖုန်းသည်ပြproblemsနာတစ်ခုသို့မဟုတ် "ပြုမူခြင်း" ကိုထူးဆန်းသောနည်းဖြင့်ပေးနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အရိပ်အယောင်ဖြစ်နိုင်ပြီးယခု၎င်းကိုမဖွင့်တော့ဟူသောဇာစ်မြစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ဖုန်းကိုမူလအခြေအနေသို့ပြန်ယူခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
ငါတို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Francisco ကသင်ရှင်းပြခဲ့သောနည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည် ဤဆောင်းပါး၌ဖုန်းမဖွင့်သော်လည်း၎င်းကိုသယ်ဆောင်ရန်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နိုင်ပါသည် ပုံမှန်မူလအနေအထားသို့ပြန်သွားပါ။ ၎င်းသည်၎င်းတွင်ရှိသောဒေတာများဆုံးရှုံးခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
သင်၏ Android ဖုန်းကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားသောအခါမြင်ကွင်းပေါ်တွင်သင်တွေ့ရသောအရာသည်လိုဂိုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကို boot screen ကိုသွားခွင့်ပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားပြီးပြီဆိုရင်တောင်အဲဒါကိုငါတို့မဖြတ်နိုင်ဘူး။ ၎င်းသည် Bootloop ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖုန်းဖွင့်သည်ဟုယူဆသည်၊ ၎င်းသည်အချိန်အတန်ကြာပိတ်မိနေသော်လည်းဤကိစ္စတွင် boot screen ကိုဆိုလိုသည်။
အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်၏ကိုယ်တိုင်မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။ ဤပြproblemနာ၏အကြောင်းရင်းဒီဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကတည်းက။ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် ကျနော်တို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေး mode ကိုဝင်ရောက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်နှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖုန်းကိုပုံမှန်အလုပ်လုပ်စေပါ။ Android မှာ recovery mode ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိဖို့၊ သင်ဤလမ်းညွှန်ကိုသုံးနိုင်သည် ငါတို့ကိုအရင်ပြခဲ့တယ်
ဤရွေ့ကားရှုထောင့်ဖြစ်ကြသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်းမဖွင့်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားအမြဲစစ်ဆေးရမည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်ထိုကဲ့သို့သောပြproblemနာရှိလျှင်ဤအဖြေများကသင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » သင်၏ Android ဖုန်းမဖွင့်ပါကသင်ဘာစစ်ဆေးသင့်သနည်း။
Facebook Messenger နဲ့ချိတ်ရင်ဘယ်လိုဖျောက်ရမလဲ